एकाबिहानै बस र ट्रक ठोक्किंदा एकको मृत्यु, दुई घा’इते – Dainik Samchar
एकाबिहानै बस र ट्रक ठोक्किंदा एकको मृत्यु, दुई घा’इते
January 20, 2021 512
चितवन । पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका–५ कालिका पेट्रोलपम्प नजिक गए राति बस र ट्रक एकापसमा ठक्कर खाँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा खोटाङका ४५ वर्षीय चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।
कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्यबहादुर थापाका अनुसार काठमाडौंबाट काँकडभिट्टातर्फ गइरहेको ना ७ ख २१११ नंबरको बस र विपरीत दिशाबाट आइरहेको ना ६ ख ४२८१ नंको ट्रक एकापसमा जुधेको थियो । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
घटनामा घाइते भएका बसका चालक श्रेष्ठको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको हो ।
राति ११ बजे भएको दुर्घटनामा परी बसका सहचालक रौतहट चपुर–४ बस्ने ४९ वर्षीय विनोद शर्मा सङ्ग्रौला र ट्रकका सहचालक बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–२३ का सुनिलकुमार साह घाइते भएका छन् ।
घाइतेहरुको पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । उनीहरुको अवस्था मध्यम रहेको र बसमा सवार १५ जना भने सकुशल रहेको प्रहरीले जनाएको छ । ठक्कर खाने ट्रकका चालक इलाका प्रहरी कार्यालय भण्डाराको नियन्त्रणमा रहेको राससले जनाएको छ । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
Prevकुलमान घिसिङलाई पुन: विद्युत प्राधिकरण दोहोर्‍याउने सरकारको तयारी ! आउनु पर्छ भन्नेले सेयर गरौं
Nextओहो! सँगै सुतेकी श्रीमति ओछ्यांन बाटै गायब,श्रीमानकै अगाडी बोयफ्रेंडले बाटो छेक्यो-भिडियो हेर्नुहोस
महरालाई आइलाग्यो फेरि अर्को आपत, रोशनी शाहीले दिइन् यस्तो धम्की
युवतीकाे मृ’त्यु भएपछी लम्कीचुहा, स्थिती त’नावग्रस्त : प्रहरीको गाे’ली लागेर दुई जना घा’इते !